PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-25 - AbakwaSAB balwa nokuhlukunyezwa kwabesibhuda
AbakwaSAB balwa nokuhlukunyezwa kwabesibhuda
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-25 - IZINDABA - KHETHA SANGWENI
ABAPHISI botshwala kuleli iSouth African Breweries (SAB) bathi bakhathazekile ngabantu abahlukumeza abesifazane nezingane bese becasha ngokuthi bebeqiwe uphuzo oludakanayo.
Isikhulu sale nkampani ophikweni lweCarling Black Label uMnuz Grant Pereira, usho kanje ngesikhathi kwethulwa umkhankaso wezinsuku ezi-16 zokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.
Le nkampani isheshe yawethula owayo umkhankaso ngoLwesine ekomkhulu layo eBryanston, eGoli. Umkhankaso kazwelonke wokukhuza lo mhlolo uqala namuhla uze uphele ngoDisemba 25.
“Ukuhlukumeza abesifazane yinkinga eqalwa amadoda, hhayi abesifazane. Yiwona amadoda okufanele ashintshe indlela acabanga ngayo. Ngeke size sivume ukuthi abantu basebenzise utshwala budedengu bese bevika ngabo uma sebenze izinto ezingekho emthethweni,” kuchaza uMnuz Pereira.
Uthe yingakho bephume bathi chithi saka ezindaweni okuhlala kuzona amadoda njengasezindaweni zokuphuzela ukuze bakhulume nawo.
Uthe kufanele abahlukumezi bakhishelwe obala babikwe bangafuywa ngoba benza okuphambene nomthetho.
Uthe utshwala yisiphuzo nje sokuzijabulisa uthibe nelanga kodwa hhayi isidakamizwa okufanele sihlanyise umuntu baze benze into abazozisola ngazo. Ugcizelele ukuthi bazimisele ngokuxoxa namadoda angu-1 million futhi bakholwa ukuthi lokho kuzokwenza umehluko omkhulu.
Kulesi sithangami bekukhona nesishabasheki esilwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane uNksz Nolwazi Tusini, okhale ngokuthi kunamadoda acabanga ukuthi uma ekhiphe ilobolo asuke esemthengile umuntu wesifazane.
“Abanye iyabadida indaba yelobolo, bacabanga ukuthi ukulobola kwenza abe ngumnikazi womuntu wesifazane. Kusuke kuqhutshwa isiko nje, kusuke kufanele aqhubeke nokuhlonishwa owesifazane ngisho elotsholiwe,’’ kuchaza uNksz Tusini.
BAKHUZA indaba yokuhlukumeza bese kuvikwa ngotshwala abenkampani kabhiya. Kwesokunxele uMnuz Grant Pereira wakwaSAB, uNksz Nolwazi Tusini olwa nodlame kwabesifazane noMnuz Graig Wilkinson ongumlobi Isithombe : SITHUNYELWE